fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana avy amin’ny Borigadin’ny zandarimariam-pirenena avy any Ambanja nandritra ny tafa manokana tamin’ny mpanao gazety omaly. Voalazan’ny loharanom-baovaon’ny mpitandro filaminana fa ilay mpamily no tapa-tanana ka hotsaboina eto an-drenivohitra. Efa eo am-pikarakarana ny taratasy sy ny fandefasana azy ny tompon’andraikitry ny fahasalamana any an-toerana. Ilay mpanampy azy kosa efa nivoaka ny hopitaly any Ambanja. Mpivahiny iray izay teo amin’ny seza mifanila tamin’ny mpamily no naratra fa tsy misy ahiana izany noho ny hakingan’ireo mpamonjy voina sy ireo mpitsabo izay nandray an-tanana azy. Mampita hafatra hatrany ny mpitandro filaminana amin’izao vanim-potoananan’ny maintany fivezivezen’ny mpiala sasatra izao mba hanaja ny hafainganam-pandeha misoratra aorian’ny fiara mpitatitra ireo mpamily, indrindra amin’ny toerana be fiolahana sy anaty tanàna.